Ama-Spiro ama-apicmo biochemical cdmo abakhiqizi
Imikhiqizo > Ama-Spiro amakhemikhali
Yiziphi izinhlanganisela ze-Spiro?
I-spiro compound (ebizwa nangokuthi i-spirane) iyinhlangano engokwemvelo, yamakhemikhali enesakhiwo esisontekile sezindandatho ezingaphezu kweyodwa. Lapha, izindandatho zihlanganiswa ndawonye nge-athomu eyodwa evamile kubo bonke. Eqinisweni, igama elithi "spiro" lithathwe kulesiLatini igama elithi spīra, okusho ikhoyili noma i-twist.
Uhlobo oluyisisekelo kunazo zonke lwe-spiro compounds yi-bicyclic, enesakhiwo esisodwa nje. (bi kusho amabili). Noma, ingaba nesabelo se-bicyclic esingaba yingxenye encane yesistimu yezinsimbi ezinkulu. Kungakhathaliseki ukuthi yiyiphi ingxenye, zonke izindandatho zixhunywe nge-athomu eyodwa echazwe yibo bonke.
Ngezinye izikhathi i-spirane ingaba carbocyclic ngokugcwele noma i-heterocyclic. I-Carbocyclic isho ukuthi izinhlanganisela ziyi-carbon, kuyilapho i-heterocyclic itholakala ukuthi ama-compounds ane-athomu eyodwa noma ngaphezulu engeyona i-carbon.
Ama-Spiral Compounds abuye abe nohlu lwezidakamizwa ezihlukahlukene ngaphansi kwazo. Izidakamizwa zibalwe ngezansi -
Uhlobo Oluhlukene Lokwakhiwa Kwe-Spiro
Njengokwakheka kwendandatho, i-spirane ibuye ihlukaniswe ngamanye ama-compounds ahlukahlukene.
I-1.Carbo- cyclic Spiro Compound
I-2.I-Spiro Compound ye-Hetero- cyclic
Ama-spiro amakhemikhali asetshenziswa emhlabeni wonke. Ezinye zalezi zinhlanganisela ziyasetshenziswa kakhulu njengethuluzi lokufakelwa ukutadisha ensimini ye-biomedical. Lezi zinhlanganisela zisetshenziselwa uhlaka losizo lwezokwelapha, ngokukhonza njenge-scaffolds.
Isifundo Esijulile Sezidakamizwa Ngaphansi Kwezingxenye Ze-Spiro
Inombolo yokungena yalesi sidakamizwa i-DB00490. I-Buspirone iyingxenye yeklasi le-azaspirodecanedione ehlanganisiwe, i-serotonin receptor agonist kanye ne-agentololytic agent. Futhi, lesi sidakamizwa sinokusebenza okungaqhathaniswa neka diazepam.
Isidakamizwa sisetshenziswa kakhulu ekwelapheni ukucindezeleka nokukhathazeka kokukhathazeka.
Inombolo yokungena yalesi sidakamizwa i-DB04842. Uhlobo lwe-molecule encane, lesi sidakamizwa i-agent antipsychotic ehlala isikhathi eside futhi ingafakwa. I-Fluspirilene isetshenziselwa ukwelashwa kwe-schizophrenia engapheli.
Inombolo yokungena yalesi sidakamizwa i-DB00693. Ngaphandle kokusetshenziswa kwezidakamizwa nezimonyo ngezinhloso zangaphandle, lesi sidakamizwa sisetshenziselwa usizo lwe-trauma elibuyiselwayo kanye nokulimala ngezinhloso zokuthobisa. Idayi ye-phthalic yellow-green indicator lapho ifilimu evamile yezinyembezi. Kodwa, kungabonakala kuluhlaza okuluhlaza okwenziwe nge-alkaline-medium efana namahlaya aqueous.
Inombolo yokungena yalokhu lesi sidakamizwa ngu-DB13911. I-Phloxine B noma i-Phloxine iyinhlanganisela yombala. Isetshenziswa umbala ekudaluleni amaphilisi (amazinyo), futhi njengesithako esihlala isikhathi eside ukusiza ukufaka umbala kumikhiqizo. Esikhathini esidlule, amaphilisi asiza iziguli ukuba zicabange kahle izindawo lapho kudingeke khona ukushayela / ukuxubha okuningi.
Inombolo yokungena yalesi sidakamizwa i-DB12030. Liyi-molecule encane evame ukusetshenziselwa ukuhlolwa kwamasimu ahlukene okutadisha. Ukuxilongwa kwe-Hepatitis, Viral, Human, Nonalcoholic Steatohepatitis, Hepatic Cirrhosis, Pharmacokinetics kanye ne-Non-Alcoholic Fatty Liver Illness.
Kuboniswa konke 6 Imiphumela